ဂေဇက်ရွာသို့ လက်ကျန်အကြွေး ရှင်းတမ်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂေဇက်ရွာသို့ လက်ကျန်အကြွေး ရှင်းတမ်း။
ဂေဇက်ရွာသို့ လက်ကျန်အကြွေး ရှင်းတမ်း။
Posted by hmee on Jan 25, 2012 in Creative Writing, Photography | 20 comments
အသားတွေကို အဲ့လို မှန်ဘောင်လေးနဲ့ ရောင်းတာ။
ဘယ်ဖက်က ကြက်သား။ ညာဖက်က အမဲသား။
၀က်သားဆိုင် မရှိဘူးလားလို့ မေးတဲ့ သဂျီးအတွက် ရုရှားတွေ ရောင်းတဲ့ ၀က်သားဆိုင်။
Jaffa ပို့စ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လိမ္မော်ပင်။
လက်ကျန်ရှင်းတမ်းလေး .. ရဖို့ ရှေ့ဆုံးက လာတိုးလိုက်ပါတယ် .. ။
အပြန်မှာ လိမ္မော်ပင်လေးပါ နှုတ်သွားချင်သေးရဲ့ .. ဟီး
စိတ်ကြီးတယ် တုံရေ။ လိမ္မော်ပင် မတင်ရလို့ တဖျစ်တောက်တောက် ပြောနေလို့ ရွာ့သမက်ကြီး ထပ်သွားပြီး ရိုက်လာပေးတာ။ မမှီက အဲ့လို ဆိုးတာ။
ဆိုးဆိုးလေးမို့ ချစ်တာ ….. ဖောင်းဖောင်းလေးမို့ ချစ်တာ … အသည်းလေးကွဲဖို့ ချစ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါ .. ဟီးဟီး .. ဘာမှ အကြာဝူးနော် … သီချင်းဆိုကြည့်ဒါ
လိမ္မော်တုံးချိန် ရောက်နေပြီလေ စုံစုံရဲ့ ဒါကြောင့် တလုံးတည်း ကျန်တာ။
ရွာ့သမက်ကပြန်လာတော့သီချင်းဆိုမပြဘူးလား ။ မိဆိုး…အဆိုးလေးမို့ကွယ်ပိုချစ်တယ် … ကိုယ့်အသဲ ကွဲသွားပစေချစ်နေမယ်….
လို့ ဆိုတဲ့ ဂျေမောင်မောင်လား ဂျေညီညီလား…သီချင်းထဲကလိုပေါ့။
hmee ရေ။ အ၀င်အထွက်အ၀ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့ထားတာလဲ ။ နောက်ကဘာအဆောက်အဦးလဲ။
nature ရေ အဲ့ဒီ့ အခုံးလေးက လမ်းပါ။ လိမ္မော်ပင် ထားထားတဲ့ နေရာက လမ်းလေးခွဆုံနေရာလေး။ နောက်က အဆောက်အဦးက မြို့ဟောင်းထဲက အိမ်ပါ။ အဲ့ဒီအခုံးလေးအောက်ကနေ ၀င်ပြီး လမ်းတလျှောက် လျှောက်သွားရင် အာရပ်ရုပ်ရှင် ဇတ်ဝင်ခန်းတွေထဲ ရောက်သွားသလိုပဲ။ လမ်းတလျှောက် ဆိုင်ခန်းတွေမှ အများကြီးပဲ။
မိန်းမဆိုး…အဆိုးလေးမို့ကွယ်ပိုချစ်တယ် … ကိုယ့်အသဲ ကွဲသွားပစေချစ်နေမယ်….
အဲဒါက တူးတူး ဆိုထားတာ လားလို့။
လိမ္မော်ပင်က အိုးထဲမှာထည့်စိုက်ထားတာလား အမ မှီ..
အမဲသားအကန့်လေးထဲက ၂၂ ဆိုတာ တကီလိုဈေးဆို မြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲဗျ..
အမရဲ့ ဂငယ်နောက်ဆုံးပို့စ်ဆိုတော့ အမှီစပ်စုတာ နော်..
အဲ့ဒါ အိုး မဟုတ်ဘူး။ ဘိလပ်မြေတုံးကြီးပါ။ အနုပညာ ပြပွဲ အတွက်လုပ်တာတဲ့ အခုတော့ အလှပြထားတယ်။ မြေကြီးနဲ့ ၂တောင်လောက် လွတ်နေတာ။ သံကြိုးတွေနဲ့ ဆိုင်းထားတာလေ။ အပင်ကို အနီးကပ် ကြည့်ရင် ဒရစ်ပိုက်ဖြူဖြူလေး ရှိတယ်။ အစာနဲ့ ရေ ပေးထားတာတဲ့။
တကီလို ၂၂ ရှကယ် မဟုတ်ဘူး။ သေသေချာချာကြည့်ရင် အနောက်မှာ ၉၀ကို သေးသေးလေးရေးထားသေးတယ်။ အဲ့တော့ အမှန်က ၂၃ ရှကယ်ပါ။ အဲ့ ဂျုးတွေ အဲ့လိုပဲ။ သေသေချာချာကြည့်ပြီး သေချာစပ်စုပြီးမှ ၀ယ်ရတယ် မဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူး။ အခုတော့ ဒေါ်လာ ဈေးတက်နေလို့ ၁ဒေါ်လာကို ၃.၈တောင် ရတယ်။ တကီလို ၁၀ဒေါ်လာ မရှိတရှိပေါ့။ အသား သိပ်မကောင်းလို့ ဖြစ်မယ် အသား အရမ်းကောင်းရင် တကီလို ၄၀ရှကယ်ကနေ ၆၀ရှကယ်ထိရှိတယ်။ အမဲသားက ဈေးကြီးတယ်။ ၀က်သားဆို တကီလို ၃၂ရှကယ် အသားကြည့်ပဲ အဆီလုံးဝမပါဘူး။ ပုစွန်ဆို ပုစွန်ကျော့ဆို တကီလို ၁၂၀ရှကယ်။ ပြည်ကြီးငါးဆို တကီလို ၈၀ရှကယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ဖြစ်ပြီး ငါးဈေးကြီးတယ်။ ကြက်သား အလွန်ပေါတယ်။ တကီလိုမှ ရှကယ် ၂၂လောက်ပဲရှိတယ်။
ရွာ့သမက်ကြီး ထပ်သွားပြီး ရိုက်လာပေးတဲ့ လိမ္မော်ပင် လိမ္မော်သီးတစ်လုံးယူသွားပါတယ် ….
ကျနော့်ဆီက ချီးထားတဲ့ ဘတ်ငွေ ဆယ့်ခုနစ်ရှစ်သိန်းကော ဘယ်တော့ဆပ်မှာလဲဂျ
မဆပ်ရင် သဂျီးတူမကို ခိုးပြေးလိုက်မှာနော်
…♪♫ ….♪♫..ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ မဗေဒါက တစ်ပင်ထဲ …..♪♫ ….♪♫..
လိမ္မော်သီးလိုချင်ပေမယ့် မနွယ်ပင်က လက်ဦးသွားတယ်ဗျာ ….
အယ်လ်အေက.. အသားဆိုင်တွေနဲ့တော့ တော်တော်ကွာတယ်..။
၀က်သားဆိုင်လေးအတွက် ကျေးဇူးနော်..။ တောက်လျှောက်သိချင်နေခဲ့တာလေး.. အထောက်အထားနဲ့တွေ့လိုက်ရလို့..။
သူကြီးတင်ပြီးတာနဲ့ မန်းလေးက အသားငါးဆိုင်ကိုတင်ပေးမယ်ဗျာ။.
မှီရေ- ရွာ့သားမက်ကြီးက တော်တော်သဘောကောင်းတာပဲ။
ရွာကို လက်ကျန်အကြွေးရှင်းတယ်ဆိုတော့ …
သာတယ် နာတယ် သဘောမထားပါဘူး။
အခုစာရင်းပြတ်ရင် နောက်စာရင်းတစ်ဖြတ်ပေ့ါ နော
ကြည့်ရှူ့ အားပေးသွားကြောင်း ရယ်ပါလေ
ကြက်သားကို အဲ့လို မြင်ရတော့ ၊ မဆီမဆိုင် မြန်မာနိုင်ငံ က စီပီကြက်သားဆိုင်ကို သွားသတိရမိပါ၏ ။
ကြက်တွေကြည့်ရတာ ဝဝဖြိုးဖြိုး နဲ့ ပိုပြီးလပ်ဆပ်သလိုဘဲ။
ဂျက်ဖာကိတ် လုပ်တဲ့ လိမ္မော် ပင်မြင်ဘူးသွားပြီ။
ဒီနေ့ မြန်မာပြည် ကိုပြန်တော့မှာမဟုတ်လား။
“မှ – နှုတ်ခွန်းဆက်သပါ၏” နဲ့ “သို့ – ကြိုဆိုပါ၏။” (ကိုဘလက် ဆီက ကူးချတာ)
အော်သများ နိုင်ငံက ကြက်တွေများ
သေတာတောင်မှန်လုံခန်းနဲ့ ကျကျနန ….
ဂုံနီကြိုးစလေး ပန်းပွားဖွာထားတာနဲ့ ဖတ်ဖတ်ဆိုရိုက်ပေး
နောက်တစ်မျိုးက ရေထုပ်ကို အပေါ်မှာ
ဈေးနှုန်းနောက်က .90 တို့ .99 တို့ထည့်တာ ဂျူးတွေကများစသလားတော့မသိဘူး၊